Saamaynta ku yeelashada CyanogenMod ROMs | Androidsis
xikmad | | Reviews, ROM, Tababarada
Qof kastaa wuu ogyahay tirada faa'iidooyinka ku yimaada rakibidda a ROM lagu kariyey bartayada 'Android terminal'. Waxaa ka mid ah nolosha batteriga, nadiifinta barnaamijka iyo xawaaraha. In kasta oo aan lagula talineynin dhagaystayaasha oo dhan maaddaama khatarta lebenku ku jiro meel kasta oo ka mid ah mar walba la joogo.
Maanta waxaan rabay inaan ka hadlo dabeecad in lagu daro ah ROM ku saleysan CyanogenMod y taasi xoogaa way qarsoon tahay. The Cyanogen Mod 6 horeyba waxay u dhexgashay muuqaalkan, saameynta la bixiyay. Waan sharxayaa waxa ay ka kooban tahay.
Muuqaalkan waxay u saamaxdaa isticmaaleha inuu ku dalbado adeegsi dhammaystirka barta gunta si uu u siiyo midab midab leh oo aan dooneyno. CM7 ee hadda jira wuxuu leeyahay:
Wax saameyn ah ma leh (in wax walba la joojiyo).
Calibrated (N1) Casaan
Calibrated (N1) Qabow
Ilaa hadda, wax yar oo dheeraad ah oo lagu daro. In badan oo idinka mid ah ayaa laga yaabaa inay ka fekeraan, hagaag, maxay tahay nacasnimadu. Waxaa hubaal ah inay isticmaasho batteri badan waana wax aan faa'iido lahayn. Hagaag, shaqsiyan sifiican ayuu iigufiican yahay. Waxaan u adeegsadaa habka habeenkii si aan u haysto desktop-ka sida ku muuqata shaashadda bilowga. Waxay ku timaaddaa mid waxtar leh in laga akhriyo sariirta wakhtiga hurdada, ma aha oo keliya buug, haddii kale interface oo dhan. Tani saameeyaa midabada, laakiin tooshka shaashaddaada Android si weyn ayaa loo dhimay, sidaa darteed nagama tegi doonto nus indhool inta aan aqrinayno RSS-keena, inta aan u sheekaysano Ciyaarta ama qaar baan dirnaa Twit
Xiiso leh ayaa ah ikhtiyaarka widget, ku darista muujinta dusha desktop-ka ee aan inta badan isticmaalno. Haysashada ikhtiyaarka dusha sare ee kombuyuutarka si aad u hawlgasho ama u joojiso sidaad doontid, uma baahnid inaan aadno liiska, dejimaha, dejinta Cuanogenmod, isdhexgalka, waxtarka waxqabadka (ee CM7). Si aad ugu darto Widget-ka, oo aad u fudud, waxaan farta ka tageynaa in cabaar ah aniga oo ku riixaya xoogaa meel banaan oo ka mid ah desktop-ka, dooro ikhtiyaarka in lagu daro widget, ka dibna Render FX Widget. Ugu dambeyntiina waxaan doorannaa midabka aan dooneyno waana intaas.
Xulashadan ayaa lagu qadarinayaa kuwa naga mid ah ee habeenkii wax aqriya ama kuwa si fudud u doonaya nuxurka shaashadooda Android, iyo Cyanogen, xigmaddiisa weligeed ah, waxay ku darsaneysaa ROM-yadiisa
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Saamaynta ku yeelashada CyanogenMod ROMs
Waa qabow laakiin markaan sameeyo, taleefankaygu wuu gaabinayaa ...
Waxaad u baahan tahay kiniin Luis ah.
Ku jawaab Ksisha
Waa run in isla wixii igu dhaca aniga markii aan dhaqaajiyo, wax walbana gaabis ayey ku dhacaan, ma caadi baa mise waxbaa ka dhiman?
Miss Call Manager, xalka wicitaanada baaqa